Magaalada Qardho ayaa si wayn looga ciiday. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Magaalada Qardho ayaa si wayn looga ciiday.
Magaalada Qardho ayaa si wayn looga ciiday.
August 21, 2018 - By: Mohamud Nadif
Waxaa Magaalada Qardho si wayn looga eegay munaasabada iidul Adxaa, jaamacada bariga afrika hoolka beenyada iyo garoonka boobe stadium ayaa ka mid ahaa meelaha laga lagu oogay labada rakcadood ee salaada, Boqor Burhaan Boqor Muuse , maamulka Gobolka Karkaar kan degmada Qardho iyo madax kale ayaa ka qayb galay, masuuliyiinta ayaa ku dheeraday ahmiyada ay leedaha khayrka maalmahan barakaysan, sidoo kale waxay bulshada kula dardaarmeen ka shaqaynta amniga iyo wada jirka.
Gudoomiyaha Gobolka Karkaar iyo Duqa Degmada Qardho waxay dhankooda bulshada Qardho uga mahadceliyeen sida ay ula shaqeeyaan dawlada, sidoo kale waxay bulshada kula dardaarmeen in dawlada lagala shaqeeyo amniga iyo horumarinta deegaanka.
Boqor Burhaan Boqor Muuse waxa uu shacabka Islaamka gaar ahaan kuwa soomaaliyeed ugu hambalayeey munaasabada Ciida, sidoo kale waxa uu rabi uga baryay in ku amaansado meel kasta oo ay ka joogaan dunida.